कपुरकोट गाउँपालिकाको उदाहरणीय काम- महिनावारी भएका छात्रालाई विश्राम कक्ष
अचेल महिनावारी हुँदा पनि सल्यानमा छात्राहरू नियमित विद्यालय आउन थालेका छन्। विद्यालयमा छात्रा विश्राम कक्षको निर्माण भएपछि छात्राहरू नियमित विद्यालय आउन थालेका हुन्। जिल्लाको कपुरकोट गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा छात्रा विश्राम कक्ष बनाएको छ। महिनावारी हुँदा छात्राहरू विद्यालयमा अनुपस्थित हुने समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाले विश्राम कोठाको व्यवस्थापन सबै विद्यालयमा गरेको अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले जानकारी दिए। उनले गाउँपालिकाभित्रका पाँच वटै माध्यामिक विद्यालयमा गाउँपालिकाले विश्राम कक्षको व्यवस्था गरेको बताए। विशेषगरी...
काठमाण्डौ – शिक्षाको फलामे ढोका मानिने एसईई परिक्षाको नतिजा बिहीबार प्रकाशित भएको छ । एसईई परीक्षामा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर ३ जीपीए नम्बरसहित उत्तीर्ण भएकी छिन् । मानन्धर बी प्लस ग्रेडमा उत्तीर्ण भएकी हुन् । अभिनेत्री मानन्धरले एसईईको तयारीका लागि विध्यालयमा भर्ना भएर नियमित कक्षा समेत लिएकी थिइन् । उनी त्रिवेणी पब्लिक बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ८ मा भर्ना भएकी थिइन् । त्यसै विद्यालयबाट उनले एसईईको तयारी गरेकी थिइन् । अभिनेत्री मानन्धरले...
(SEE) एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, हेरेर सेयर गर्नुहोस
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले हिजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरे पनि केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले आज परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो। विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि २१ सम्म परीक्षा भएको थियो। देशभरका सात प्रदेशमा एक हजार नौ सय ७९ वटा केन्द्रमा लिइएको परीक्षाको परीक्षाफल बिहीबार अपरान्ह प्रकाशित भएको हो। कुल चार लाख ४९ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सामेल...
(SEE) परीक्षाको रिजल्ट भोलि असार ११ गते सार्बजनिक हुने ! जानकारीको लागि सेयर गरौ
काठमाडौं/ यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा बुधबार (भोलि)असार ११ गते प्रकाशित गरिने भएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणपछि सबै काम सम्पन्न गरी अन्तिम रुजु गर्ने कार्य भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरण पुगेको छ । सम्भवतः बुधबार नै प्रकाशित हुनेछ । कथंकदाचित प्राविधिक पक्ष मिलाउन ढिलाइ भएमा बिहीबारसम्म नतिजा आउँछ’, कार्यालयका एक अधिकारीले भने । नतिजा प्रकाशनका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम अवस्थामा...
लिम्बू समुदायमा ‘भाषा र संस्कृति’ प्रतिको प्रेम, कक्षा १ देखि ११, १२ मा लिम्बू भाषा पठनपाठन,
पूर्वी नेपालमा लिम्बू भाषीले झण्डै एक दशकदेखि राज्यको लगानीविना कक्षा १ देखि ७ सम्म र ११, १२ मा लिम्बू भाषा पठनपाठन गराएर भाषा र संस्कृतिप्रति प्रेम देखाइरहेका छन् । आफ्नो भाषा र लिपिलाई जोगाउन राज्यपक्षबाट कुनै पनि लगानीविना विद्यालयमा पठनपाठन गराइरहेका छन् । लिम्बू भाषाको विकासका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका मलिसा याक्थुङबा लिम्बू भाषालाई सरकारले योग्यताको भाषा बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समुदायले प्रयोग गर्ने भाषा किन...
आफुलाई आबस्यक डट र कापी किन्न स्कुलमै गिटी कुट्दै बालबालिका
जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका–४ मैनाका पुष्पा बस्नेतले पढाइ खर्च जटाउन गिट्टी कुट्न बाध्य भएका छन् । गरीबी तथा विपन्नताका कारण अभिभावकले पढाइ खर्च जुटाउन नसक्दा पुष्पा आफैँले गिट्टी कुटेर पढाइ खर्च जुटाउँदै आएकी छिन् । उनले भनिन्, “रहरले गिट्टी कुट्ने गरेकी होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो, पढाइ खर्च जुटाउनका लागि बाध्य भएर गिट्टी कुट्ने गरेकी हो ।”गिट्टी कुटेर आफूले कमाएको रकम बाट भाइ, बहिनीकोे पढाइ खर्चसमेत धान्ने गरेको उनी...
इन्डोनेसियाको वेस्ट जाभास्थित सुकाबुमी नामक एउटा सानो गाउँमा बस्ने आठ वर्षीय बालक अहिले धेरैका निम्ति प्रेरणाका पात्र बनिरहेका छन् । जन्मदै शारीरिक रुपले अशक्त, अब्दुल होलिकका दुवै खुट्टा चल्दैनन् । तर, यस कमजोरीलाई उनले कहिल्यै आफ्नो पढाइप्रतिको रुचिमा बाधा पु¥याउन दिएनन् । यसरी दुवै हातमा चप्पल लगाएका अब्दुल हात टेकेरै चट्टानयुयक्त भिरालो बाटो हुँदै ६ किलोमिटर टाढा रहेको विद्यालय सम्मको संघर्षपूर्ण यात्रा गर्ने गर्दछन् । यसैले, विद्यालयभर उनको बहादुरीको...
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी तलब खाने कर्मचारीका छोराछोरी अब सार्वजनिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने,
काठमाडौं । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। सो...
विद्यार्थीलाई किन कुट्नु हुँदैन ?
किनकि उनीहरू कुटिनका लागि होइनन् । कुटेर सिक्ने भए पढाउनु/सिकाउनु पर्दैनथ्यो । बालबालिकाका अंगहरू कोमल हुन्छन् । समान्य कुटाइले पनि उनीहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्छ । बालमस्तिष्क अति संवेदनशील हुन्छ । कुटाइका कारण उनीहरू झनै आक्रामक बन्न पनि सक्छन् । कुट्नेलाई लाग्ला कि यति कुटेपछि विद्यार्थी अलि सुध्रिन्छ । तर विद्यार्थीले कहिल्यै त्यसरी सोच्दैनन् । कतिपय विद्यार्थी आफ्नै परिवारबाट अनियन्त्रित भएका हुन्छन् । कुटाइले उनीहरूमा झनै उल्टो असर पार्छ । कुटाइले बच्चामा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक सोचको ज्यादा विकास हुन्छ । घरमा सधै ‘पढ् पढ्’ भनेर अभिभावकले गाली...